» शाहरुख खान कसरी बने बच्चा ? रहस्यको पोको खुल्दै
मकवानपुर, ०३ असार । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि अब शाहरुख खानका छोराछोरी समेत निकै ठूला भइसकेका छन् । तर उनी एक्कासी कसरी होचा कदका साना बालक बने ? यो विषयले बलिउडमा हिन्दी चलचित्र ‘जिरो’ को शुटिङ भएको अवस्थादेखि नै चर्चा पाएको थियो । निकै वर्षपछि शाहरुख खान र सलमान खान संगै देखिएका ‘जिरो’ को इद विशेष टिजर सार्वजनिक भएसँगै यसको चर्चा थप चुलिएको छ ।
चलचित्र ‘जिरो’ को इद विशेष टिजर हेरेर कुनै पनि कोणबाट सलमान र शाहरुखको यो चलचित्रमा के छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । सलमान खानको गेस्ट रोल हो वा पुरा चलचित्रमा उनी छन् भन्ने कुरा भने फिक्स जस्तै छ । सलमान खान यस चलचित्रमा गेष्टकै रोलमा फिट छन् । तर होचा कदका बउवाको संघर्ष नै चलचित्रमा समेटिएको विषयलाई नकार्न सकिन्न । सन् २०१८ को डिसेम्बर २१ लाई प्रदर्शन मिति तोकिएको चलचित्रमा शाहरुखसँगै अनुश्का शर्मा र कट्रिना कैफको अभिनय रहेको छ ।
यो सामाग्री तयार पार्दासम्म यस इद विशेष टिजरलाई २ करोड ३५ लाख ३१ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । भिडियोमा ४५९ के र ३६ हजार ४ सयभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् । रेड चिल्ली इन्टरटेन्मेन्ट र कलर यल्लो प्रोडक्सनको प्रस्तुती रहेको चलचित्रलाई गौरी खानले निर्माण गरेका हुन् । चलचित्रमा अजय–अतुलको संगीत छ । हिमांशु शर्माको कथा रहेको चलचित्रलाई आनन्द एल राईले निर्देशन गरेका हुन् ।